Cycloastragenol Powder - Mugadziri Fekitori
Inogadzira NMN neNRC mapoda muhuwandu!
Cycloastragenol chinyorwa chisingaperi chinorwisa-kukwegura chekudya chinowedzera chinogadzirwa pamusika.
Cycloastragenol poda (78574-94-4) vhidhiyo
Pamusoro peizvi, iwe unofanirwa kuziva zvakawanda nezvazvo.
Cycloastragenol powder Specifications
Product Name Cycloastragenol poda
Molecular Wsere 490.7 g / mol
ruvara white to beige
Skukodzera DMSO: 10 mg / mL, yakajeka
APane Cycloastragenol ndeye potent telomerase activator. Zvakare, iyo inogona kuve yakabatana ne-anti-kukwegura mune yetsika chinese mushonga.
Cycloastragenol chinyorwa chisingaperi chinorwisa-kukwegura chekudya chinowedzera chinogadzirwa pamusika. Iyo inoshandiswawo mune yakasvibirira skincare uye cosmetics mafomula. Cycloastragenol yakatanga kutengeswa mune zvekudyira zvikafu muU.S. muna 2007 pasi peZita-65, izvi ndosaka TA 65 kana TA65 richiri zita rinonyanya kuzivikanwa recycloastragenol.
Chii chinonzi Cycloastragenol?
Cycloastragenol imorekuru rakatorwa kubva kuAustrragalus membranaceus herb. Iyo Astragalus herb yave ichishandiswa mumushonga wechiChinese kwemazana emakore. MaChinese akataura kuti Astragalus inogona kuwedzera hupenyu uye yakashandiswa kurapa kupera simba, kutonhora, kutonhora, chirwere chemoyo uye chirwere cheshuga.
Cycloastragenol ndechimwe chezvinhu zvinoshanda muAustrragalus. Cycloastragenol ine yakafanana kemikari chimiro kune iyo yeAdragragoside IV mamorekuru, asi iyo idiki uye zvakanyanya kuwedzera bioava kuwanikwa, zvichiita kuti yakaderera madhiragi atorwe. Inotoshandiswa seye immunostimulant nekuda kwekugona kwayo kuwedzera T lymphocyte proliferation. Nekudaro, iyo iripo yakasarudzika yekudzivirira kukwegura iyo iri yekuwedzera kufarira kunharaunda yesainzi.
Cycloastragenol inokurudzira kugadziriswa kweDNA kukuvara nekumisikidza telomerase, iyo enzyme yenucleoprotein iyo inokonzera synthesis uye kukura kweiyo telomeric DNA. Telomeres inogadzirwa netete dzakatetepa uye inowanikwa pazano remakromosomes. Kuchengetedza kudzikama kwavo kunoita kuti maseru adzore kudzokedzana senescence uye kuwanda kusingaperi kupfuura iyo 'Hayflick muganho'. Telomeres inopfupisa neese kutenderera kwesero kupatsanurwa, kana kana ichiiswa kune oxidative kusagadzikana Kusvika ikozvino, iyi yanga iri nzira isingadzivisike yekukwegura.
Nzira dzekuita cycloastragenol
Nhamba huru yezvidzidzo yakaratidza kuti kupfupika kuri kufambira mberi kwetelomeres kwakabatana zvakanyanya nezvirwere zvakawanda zvine chekuita nezera (chirwere chemoyo, hutachiona, nezvimwewo) uye zvakare fungidziro yekufa kwepamberi muzvidzidzo zvevakweguru. Telomeres inotapudza nekutenderera kwega kwega kwekuparadzaniswa kwesero, kana kana ichishungurudzika oxidative kusagadzikana. Kusvika parizvino, iyi yave iri nzira isingadzivisiki yekukwegura.
Telomerase iserooprotein enzyme iyo inoratidzira maitiro uye kukura kwe telomeric DNA uye inomutsa kugadziriswa kweDNA kukuvara.
Cycloastragenol inoshanda uye inomutsa iyi enzyme, nokudaro ichideredza kupfupika kwetelomeres uye zvakare kuwedzera nhamba yavo. Nenzira iyi, inobvumira kureba kweiyo telomeres uye semhedzisiro, inowedzera hupenyu hwechitokisi.
Nekuda kwehuremu hwayo hushoma, Cycloastragenol inopfuura nyore kuburikidza nemudumbu remukati. Kusimudzira kwakaringana kunobvumira yakanyanya kubudirira, kunyangwe pane yakaderera dosi. Kuwedzerwa kwemazuva ese kungave kwega, kana mukubatanidzwa kana kuchinjaniswa ne, astragaloside IV, nokudaro kuchabatsira kurega kukwegura uye nekuzvarwa narwo kutarisira hupenyu hwehupenyu.
Astragalus membranaceus iri pakati pemakwenzi akakosha kwazvo mune yeChinese Chinese Medicine nhoroondo semushonga wepanyama wekurapa kuneta, kurwara, maronda, kanzira, hay fever, post sitiroko, kurarama kwenguva refu nezvimwe. Nekudaro, iwo mabhenefiti akakosha ecycloastragenol poda akaita sekurwisa-kuchembera uye kutsigira immune maitiro.
Cycloastragenol uye kutsigira immune
Cycloastragenol inogona kushandiswa kuchengetedza immune system, antibacterial, uye antiinflammatory, yekudzivirira kutonhora kujairika uye yekumusoro kufema system hutachiona. Iyo yakashandiswa seyemuviri wekuvandudza musimba nekuda kwekugona kukwidziridza kuwanda kweT lymphocyte. Nekudaro, izvo izvo nzanga yesayenzi iri kuwedzera kufarira ndeyekudzivirira kwayo kwakanaka kwekukwegura. Cycloastragenol inokurudzira DNA kuti igadzirise kukuvadza nekutanga telomerase uye kubvumira iyo nyukiliya proteinase yakarebesa synthesis uye kukura kwe telomere DNA.
Cycloastragenol uye anti-kukwegura
Anti-kukwegura ndeye cycloastragenol ndiyo inonyanya kuratidza kubatsira. Cycloastragenol haisi kungononoka kukwegura kwevanhu, asi nekuwedzera yakawedzera kusasimba, kuchengetedza hupfu, kuchengetedza midhiya masero, anonyanya kutorwa kubva muyeredzi yeAchragaloside (Astragaloside Ⅳ) hydrolysis.
Dzimwe Cycloastragenol inobatsira
cycloastragenol poda ine mhedzisiro yekudzora kushushikana uye kuchengetedza muviri kubva kune dzakasiyana siyana kushushikana, zvinosanganisira zvemuviri, kwepfungwa, kana kushushikana kwepamoyo;
cycloastragenol poda ine antioxidants, inodzivirira masero kubva kukuvara kunokonzerwa nemahara radicals;
cycloastragenol poda ine mhedzisiro yekudzikisa kweropa, kurapa chirwere cheshuga nekuchengetedza chiropa.
Cycloastragenol poda mativi
Kusvika pari zvino, hapana chero mushumo kana kuongororwa kweanokanganisa maitiro kana contraindication kutora cycloastragenol yekuwedzera.
Cycloastragenol chinamatidzwa chipimo chemushonga
Cycloastragenol inyowani itsva uye kwete yakawanda mishonga yekuwedzera pamusika, uye hapana yakakurudzirwa dhesi inowanikwa. Maererano nezvakaitika kwatiri, iyo dosi yacho inosiyana nezvinangwa zvakasiyana, zera. Ehe cycloastragenol inonyanya kutyisa kupfuura Astragaloside IV ine yakakurudzirwa piritsi ndeye 50mg pazuva. Ndichiri cycloastragenol, dosing kubva pa10mg kusvika ku50mg zvese zvakanaka. Iyo yekare inoda kutora kupfuura vakuru vezera repakati. Vamwe vanopa kutanga ne5mg pazuva, uye wobva wawedzera zvishoma nezvishoma. Sezvo cycloastragenol ichibvisa zvakasikwa, zvinogona kutora nguva kuti uone mhedzisiro, dzinenge mwedzi mitanhatu.
Cycloastragenol yakakwaziswa nevamwe sechishamiso chinopesana nekukwegura. Zvidzidzo zvekutanga zvinoita sekuvimbisa, zvichiratidza kuti zvine simba rekuwedzera telomere urefu, zvisinei hazvo zvichiri kushomeka kwekutarisa kwakaitwa nevezera. Uye zvakare, pane kumwe kushushikana kuti kutora Cycloastragenol kunogona kuwedzera njodzi yevamwe makenza. Nekudaro, zvidzidzo zvekutsvaga hazvina kukwanisa kutanga chero panjodzi yekenza inosanganiswa nekushandiswa kweCycloastragenol.
Cycloastragenol inoita kunge chivimbiso chinopesana nekukwegura. Kunyange zvisati zvave zvichiratidzwa kuti zvinowedzera hupenyu hwehupenyu zvakadaro zvakaratidzirwa kudzikisa akasiyana mazera anosanganisirwa biomarkers. Pamusoro pezvo zvakaratidzirwa kudzikisa zviratidzo zvekukwegura senge mitsara yakanaka uye kuunyana. Inogona zvakare kudzikisa njodzi yezvirwere zvinodzikira seAlzheimer's, Parkinson's, retinopathies, uye cataract.
Cycloastragenol poda inoshandisa uye kushandisa
Cycloastragenol inoshandiswa pakurapa, kutonga, kudzivirira, & kugadzirisa kwezvirwere zvinotevera, mamiriro uye zviratidzo:
Cycloastragenol inogona zvakare kushandiswa zvinangwa zvisina kunyorwa pano.
Bulk cycloastragenol poda yakashandiswa pasi pesango:
Inoshandiswa mumunda wekudya, inowanzoshandiswa sechikafu chinowedzera;
Inoshandiswa mumunda wechigadzirwa chehutano, ichi chinyorwa chinobatsira kumuviri wemunhu;
Yakashongedzwa mumunda wekushongedza, senge rudzi rwezvinhu zvakasvibirira, inogona kusanganisa cosmetics yemusango.
Anti-kuchembera zvigadzirwa zvecycloastragenol inogadzirwa ne biotransformation.Chen C, Ni Y, Jiang B, Yan S, Xu B, Fan B, Huang H, Chen G. Nat Prod Res. 2019 Sep 9: 1-6. doi: 1080 / 14786419.2019.1662011.
Cycloastragenol: Inonakidza inoverengeka mumiriri wezvirwere zvine hukama nezera. Yu Y et al. Exp Ther Med. (2018) Anti-kuchembera zvigadzirwa zvecycloastragenol inogadzirwa ne biotransformation. Chen C, Ni Y, Jiang B, Yan S, Xu B, Fan B, Huang H, Chen G. Nat Prod Res. 2019 Sep 9: 1-6. doi: 10.1080 / 14786419.2019.1662011
Cycloastragenol inogona kukanganisa kuita STAT3 activation uye kukurudzira paclitaxel-indipopoposis mumasero emukenza emudumbu. Hwang ST, Kim C, Lee JH, Chinnathambi A, Alharbi SA, Shair OHM, Sethi G, Ahn KS. 2019 Jun
Astragaloside VI uye cycloastragenol-6-O-beta-D-glucoside inosimudzira kurapa kwevaronda mu vitro uye mune vivo.Lee SY et al. Phytomedicine. (2018)